IVA 20T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 20T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA20T
About IVA20T 20ton Industrial Tube Ice Making Machine - the best product in Vietnam.
IVA 20T ၂၀ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်- ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး ပစ္စည်း
Members of Viet An Company in the South Area
တောင်ပိုင်း ဧရိယာရှိ Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
This product offers an average daily capacity of 20,000kgs. The capacity difference is not remarkable. Thus, you can feel secure about the supply capacity regardless of the weather impact.
ဒီပစ္စည်း က တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ ၂၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ခြားနားချက်က အံ့သြစရာတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရာသီဥတု အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဂရုပြုစရာ မလိုဘဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
To know more details about the price of tube ice making machines, ranging from mini machines to industrial machines, go to: https://vietan.vn/may-lam-da-vien .
Typically, an ice-making machine costaremarkable amount. Therefore, the prices of the ice-making machines in the market isafrequently asked question recently. The answers vary depending on the machine quality, brand names and capacities? To get insights into the benefits of an IVA20T 20ton Industrial Tube Ice Making Machine, go through the article below.
တကယ်တော့ ရေခဲထုတ်စက်တစ်ခုက ဈေးအများကြီး ပေးဝယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်ထဲက ရေခဲထုတ်စက်တွေအကြောင်း မကြာခဏ မေးခွန်းထုတ်ခံရပါတယ်။ အဖြေကတော့ စက်ရဲ့ ကွာလတီ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမည်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲပါတယ်။ IVA 20T ၂၀ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်ပါ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုကြည့်ရအောင်။
With 10 years of foundation and development, asaleading company in manufacturing, importing and distributing ice-making machines , Viet An is proud to bring the customers the highest quality products at the most reasonable prices as well as professional and dedicated services.
၁၀ နှစ်တာ တိုးတက်လာမှုနဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ Viet An မှ ဝယ်ယူသူများသို့ ကွာလတီအကောင်းဆုံး ပစ္စည်းများကို အသင့်နေတော်ဆုံး ဈေးနှုန်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ ယူဆောင်လာပေးရတာကို အလွန်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
IVA20T 20TON INDUSTRIAL TUBE ICE MAKING MACHINE (100% New )
IVA 20T ၂၀ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
Viet An is offering out 20ton ice-making machines at the highest prices compared to other suppliers in the market. You must be wondering why we sell our products at such high prices. The answer will be revealed in the article below.
Viet An မှ ၂၀ တန် ရေခဲထုတ်စက်များကို ဈေးကွက်က အခြားစက်တွေထက် ဈေးနှုန်းမြင့်စွာ ရောင်းချနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဈေးများနေရလဲဆိုတာ သင်သိချင်ပါသလား။ အဖြေက အောက်က ဆောင်းပါးထဲမှာ ရှိပါတယ်။
Depending on the capacities, typically,anew compressor costs nearly 160 million dongs. Meanwhile, an old compressor (which has been in use for 10 years before being imported into Vietnam) only costs around 40 million dongs. The gap betweenanew and old machine is around 120 million dongs. A good compressor isadecisive factor to makeasmooth, durable operation and energy-saving.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပေါ် မူတည်ပြီး ဖိသိပ်စက် အသစ်က ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၆၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ၁၀ နှစ်ကျော်အသုံးပြုထားပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို တင်ပို့ထားတဲ့ ဖိသိပ်စက် အဟောင်းကတော့ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း၄၀ နီးပါးသာ ရှိပါတယ်။ အသစ်နဲ့ အဟောင်း ဈေးနှုန်း ကွာခြားချက်က ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၂၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဖိသိပ်စက်က ချောမွေ့ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး အင်နာဂျီ ချွေတာပေးပါတယ်။
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA20T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ပိုးမှုစနစ်က လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ IVA 20T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်လည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။
An IVA20T exported stainless steel ice-making machine can be used to produce ice of various sizes
IVA20T ၂၀ တန် စတိန်းလက်စ်စတီးရေခဲထုတ်စက်ကို ရေခဲ အရွယ်အစားမျိုးစုံထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တယ်။
Remember that every ice-making machine can be used to produce ice of only one dimension. Viet An’s 20ton ice-making machines can be used produce ice of following dimensions:
ရေခဲထုတ်စက်တစ်ခုချင်းစီက တိကျသော အရွယ်အစားတစ်ခုကို ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်လို့ သင်နှစ်သက်တဲ့ အရွယ်အစားကို ကြိုတင်မှာယူဖို့ သေချာပါစေ။ IVA 20T ၂၀ တန် စတိန်းလက်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို အောက်ပါ ရေခဲ အရွယ်အစားတွေ ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
- Type 1 is designed at 48 x 80 mm dimension for beer or soft drinks. With this dimension, the melting time is long but somehow it might cause inconvenience.
-အမျိုးအစား ၁ ကို ၄၈×၈၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ဘီယာ၊ အဖျော်ယမကာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားနဲ့ဆိုရင် ရေခဲက လျင်မြန်စွာ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကြီးသော အရွယ်အစားကြောင့် တခါတရံ အဆင်မပြေမှုတွေတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
- Type2is designed at 38 x 45 mm dimension which is suitable for tea, wine, etc. This type has medium size while still ensuring long melting time.
-အမျိုးအစား ၂ ကို ၃၈×၄၅ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး လက်ဖက်ရည်အေး၊ ဝိုင် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အရွယ်အစားက သိပ်မကြီးတဲ့အတွက် ရေခဲကို အချိန်အကြာကြီး ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
- Type3is designed at 34 x 40 mm dimension which is also suitable for tea and wine. This size is quite convenient to use.
-အမျိုးအစား ၃ ကို ၃၄×၄၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး လက်ဖက်ရည်အေး၊ ဝိုင်တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်အစားက အသုံးပြုဖို့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
- Type4is designed at 18 x 30 mm which best suits coffee, fruit juice. It can make the drinks cold quickly but the melting time is very short.
-အမျိုးအစား ၄ ကို ၁၈×၃၀ မီလီမီတာ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး ကော်ဖီ၊ အသီးဖျော်ရည် စတာတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါက သောက်စရာတွေကို လျင်မြန်စွာ အေးစေပြီး အရည်ပျော်တဲ့အချိန်က တိုပါတယ်။
Keep in mind above information and choose the product that best suits your demands.
အပေါ်က အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး သင့်အကြိုက် အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
For the best operation and quality, the customers should invest in following machinery:
အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဝယ်ယူသူများအနေနဲ့ အောက်က စက်တွေကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
With our high quality products andaprofessional and dedicated technical team, we commit to bringing you the best products. Call us now at 0949.41.41.41 to get free consultation.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျတဲ့ နည်းပညာအသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံး ယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
KL30 cold storage system
VAMĐ 24T Water filtration system
VAMĐ 24T ရေစစ်စနစ်
Hỏi đáp & đánh giá IVA 20T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)